Pregnancy - Facts to get pregnant ကိုယ်ဝန်ရအောင် ကြံဆောင်နည်း
ပို့စ်တင်ချိန် - 5/26/2014 04:35:00 PM
ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံ အိမ်ထောင်ကျတာ ၄ လအတွင်းကိုဝင်ပါပြီ။ အိမ်ထောင်စကျကတည်းက တားဆေးမသုံးပါ။ ကျွန်တော်က အသက် ၃၁ နှစ်၊ ဇနီးသည်က ၂၈ နှစ်ပါ။ ယခုအချိန်ထိကိုယ်ဝန်မရသေးပါခင်ဗျာ။ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကလေးလည်း လိုချင်လှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးဆရာ။ ဘယ်လိုဆေးတွေသောက်ဖို့လိုမလဲ ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လိုနေထိုင်ပြုကျင့်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ တခြားလိုအပ်တာလေးတွေလည်း ပြောပြပေးပါအုံးဆရာခင်ဗျာ။
မိန်းကလေး တယောက်ဟာ မွေးလာကာစတုံးက မျိုးဥပေါင်း ၁ သန်းကနေ ၂ သန်းအထိရှိနေခဲ့တာပါ။ အပျိုဖြစ်တဲ့နောက် တလမှာ တဥနှုန်းနဲ့ ထွက်လာတယ်။ သွေးမဆုံးခင်အထိ တွက်ရင် စုစုပေါင်း မျိုးဥအရေအတွက် ၃ဝဝ ကနေ ၄ဝဝ ရှိမယ်။ အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေး ၅ ယောက်အမေဖြစ်ရင် တကယ်တန်း အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ မျိုးဥပေါင်း ၅ ခုသာဖြစ်မယ်။ ကလေး မရသေးသူတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေဘို့ရာ ကိုယ့်ရာသီကိုယ် သိရမယ်။ ရာသီတလကို သွေးစဆင်းနေ့ကနေ တွက်တယ်။ တလဆိုတာ ၂၈ ရက်ကနေ ၃၂ ရက်အထိရှိနိုင်တယ်။ မျိုးဥထွက်တာ လလည်ရက်မှာ အများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ ၁၁ ရက်ကနေ ၂၁ ရက်အတွင်းမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရာသီဆင်းတဲ့နောက် ၂ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ FHS ဟော်မုန်း ထွက်လာလို့ မျိုးဥအိမ်မှာရှိတဲ့ (ဖေါ်လီကယ်လ်) တွေကို နှိုးဆွပေးတယ်။ သားအိမ် အတွင်းဆုံးအလွှာကိုလဲ ထူထဲလာစေတယ်။ အဖို-အမ မျိုးစပ်ပြီးသားဥ Fertilized egg ကို Implantation တွယ်ကပ်ဘို့ ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။
LH ခေါ်တဲ့ နောက်ဟော်မုန်းတမျိုးလဲ ထွက်လာမယ်။ သူကနေ အရင့်မှည့်ဆုံးဥကို (ဖေါ်လီကယ်လ်) ထဲကနေ ထွက်လာစေတယ်။ သားအိမ်ဝမှာရှိတဲ့ အကျိအချွဲကလဲ ချောကျိကျိပိုဖြစ်လာပြီး (ဗဂျိုင်းနား) ကနေ ဝင်လာမဲ့ သုက်ပိုးဝင် ဝင်လာနိုင်အောင် ရေလာမြောင်းပေး လုပ်ပေးတာမယ်။
မျိးဥကလဲ မျိုးဥအိမ်ကနေထွက်၊ သားအိမ်ပြွန်အပေါက်ဝထဲကိုဝင်၊ သားအိမ်ပြွန်တလျှောက် ဝင်လာမယ်။ လမ်းမှာတင် အဖိုသုက်ပိုးနဲ့ မ-မျိုးဥတွေဆုံပေါင်းစပ်မှု ဖြစ်မယ်။ မ-မျိုးဥဟာ မျိုးဥအိမ်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက် အဲလို သုက်ပိုးနဲ့ မတွေ့ရရင်တော့ ၁၂-၂၄ နာရီထက်ပိုပြီး ဆက်ရှင်မနေဘူး။ သုက်ပိုးကတော့ ၃-၅ ရက်အထိ ရှင်သန်နေနိုင်တယ်။
ကလေးရချင်သူတွေ မ-မျိုးဥရှင်သန်နေတဲ့ ၂၄ နာရီနဲ့အံကိုက် သုက်ပိုးနဲ့တွေ့အောင် စီမံချက် ကောင်းကောင်းချတတ်ဘို့ လိုတယ်။ အကောင်းဆုံးရက်ဆိုတာ မ-မျိုးဥထွက်မဲ့ရက် မတိုင်ခင် ၁-၂ ရက်တွေဖြစ်တယ်။ ရာသီတလဟာ ၂၈ ရက် ဖြစ်သူတွေမှာ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့ကနေ ရေတွက်ရင် ၁၂-၁၃-၁၄ ရက်နေ့တွေဖြစ်တယ်။
သတိတခုထားစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီ ၃ ရက်လုံးလုံး နေနိုင်သလောက် အတူနေမယ်ဆိုတာလဲ သိပ်ကောင်းမယ်မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားမှာ ဆက်ဆံမှုများလို့ သုက်လွှတ်တာဆက်တိုက်များရင် Sperm count သုက်ကောင်ရေ အရေအတွက်ကို နည်းစေနိုင်တယ်။
မိန်းမဘက်ကလဲ တွက်ရအုံးမယ်။ Ovulation မျိုးဥထွက်ရက် အသေအခြာသိချင်ရင် Temperature ကိုယ်ပူချိန်မှတ်တမ်း လုပ်ထားပါ။ မျိုးဥတခု ထွက်သွားပြီး ကျန်နေတဲ့ (ဖေါ်လီကယ်လ်) ကို Corpus luteum (ကောပတ်စ်-လူတီယမ်) လို့ ခေါ်တယ်။ သူကနေ ဟော်မုန်းနောက်တမျိုး ထွက်လာပြန်တယ်။ အဲဒီ Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုံး) ကနေ သားအိမ် နံရံကို ထူထဲလာအောင် လုပ်ပေးမယ်။ ကိုယ်ဝန်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးတာပါဘဲ။ ဒီဟော်မုန်းတန်ခိုးကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်ကို နဲနဲမြင့်တက်စေမယ်။ မနက်အိပ်ရာနိုးချိန် ဘာတခုမှ မလုပ်ကိုင်သေးခင် အပူချိန်တိုင်းပါ။ အတိအကျ မှတ်သားထားပါ။ Basal thermometer တခုကို ၁ဝ ဒေါ်လာပေးရတယ်။ အကြမ်းဖျင်းတော့ သိနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒေါ်လာ ၂ဝ-၅ဝ တတ်နိုင်ရင် Ovulation kits ဝယ်သုံးပါ။ LH ဟော်မုန်း များများလာတာဟာ မျိုးဥထွက်တာမို့ ဆီးထဲပါနေတဲ့ LH levels ကို တိုင်းနိုင်တယ်။ ကောင်းတဲ့ ကရိယာနဲ့ဆို နေ့တိုင်းစစ်နိုင်လို့ ၉၉% မှန်နိုင်တယ်။
သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥ ရေစက်မဆုံနိုင်ကြရင်တော့ Progesterone ဟော်မုန်းနည်းနည်းလာမယ်။ ၁၂-၁၆ ရက်အကြာမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ သားအိမ်အတွင်းလွှာက သွေးနဲ့ (တစ်ရှူး) တွေထဲမှာ မျိုးမစပ်လိုက်ရတဲ့ မျိုးဥပါရောပြီး Menstruation ရာသီ အဖြစ်ဆင်းတယ်။ နောက်တလ စပြန်ပါလိမ့်မယ်။ သွေးဆင်းနေတာ တချို့မှာ ၃ ရက်၊ တချို့ ၇ ရက်ကြာမယ်။
• အသက် ၃ဝ အရွယ် ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း လတိုင်းလတိုင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့အခွင့်အလမ်း ၂ဝ% ရှိတယ်။
• အသက် ၂ဝ အရွယ် ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း လတိုင်းလတိုင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့အခွင့်အလမ်း ၅% ရှိတယ်။
• Foods rich in folic acids (ဖေါလစ်-အက်စစ်) များတဲ့အစားအစာ စားပါ။ Folic acids ဆေးသောက်ပါ။
• Organic foods and green products (အော်ဂဲနစ်) အစားအသောက် ရွေးချယ်စားသောက်ပါ။
• Plastics (ပလပ်စတစ်) ထုပ်ပိုးတာမျိုး ရှောင်ရှားပါ။
• အစားအသောက်ဆင်ခြင်တာနဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင်ခန်းလုပ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။
• Alcohol and caffeine အရက်၊ ကေဖင်း-ဆေးလိမ် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
• အသက် ၄၅ ကျော်ရင် အခွင့်အလမ်း နည်းနည်းလာမယ်။
• Managing stress စိတ်ဖိအားလျှော့ချနည်း လုပ်ပါ။
• Alcohol and tobacco အရကိ၊ ဆေးလိပ် ရှောင်ပါ၊ လျှော့ပါ၊ ဖြတ်ပါ။
• Weight ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ။
• Zinc (ဇင့်) ဓါတ်ပါတဲ့ အသား၊ ဖြူဖွေးနေအောင် ချွတ်မထားတဲ့ အနှံမျိုးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ ပင်လယ်စာ နဲ့ ဥတွေ စားပါ။
• Selenium ပါတဲ့ အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ မှို၊ ဖြူဖွေးနေအောင် ချွတ်မထားတဲ့ အနှံမျိုးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ အစေ့အဆံတွေ စားပါ။
• Vitamin E (ဗီတာမင် အီး) သောက်ပါ။
• Testicles ကျား-အစိ (တက်စ်တိစ်) ကို အေးနေအောင် သတိထားပါ။
Infertility links ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း လင့်ခ်များ
1. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/clomiphene-citrate.html
2. Fertomid 50 mg မျိုးဥကျွေဆေး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/11/fertomid-50-mg.html
3. Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/infertility-1.html
4. Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/infertility-2.html
5. Infertility (3) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၃) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/09/infertility-3.html
6. Infertility and Fallopian Tube Procedures သားအိမ်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/fallopian-tube-procedures-for.html
7. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/infertility-and-tb.html
8. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/tb-and-infertility.html
9. Infertility Q and A ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း အမေးအဖြေများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2014/02/infertility-q-and.html
10. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/infertility-treatments.html
11. Infertility Treatments (2) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/infertility-treatments-2.html